Nepali Rajneeti | देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले किन बोले अंग्रेजी?
देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले किन बोले अंग्रेजी?
बैसाख २०, २०७८ सोमबार ११४ पटक हेरिएको
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार दिउँसो देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेका छन्।
नेपाली भाषामा गरिएको सम्बोधन सकिनै लाग्दा प्रधानमन्त्री ओलीले अंग्रेजी बोल्न थालेका थिए।
देशवासीको नाममा गरिएको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले अंग्रेजी बोल्न थालेपछि धेरैलाई अचम्म लागेको थियो।